Thursday February 15, 2018 - 10:33:20 in Wararka by Super Admin
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay weerar ka dhacay gudaha wadanka Mareykanka kadib markii ruux hubeysan uu rasaas ku furan iskuul carruur wax ku baranayeen.
Ugu yaraan 17 qof oo badankood ahaa Arday ayaa dhintay toban kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii Nin19 sana jir ah uu toogasho ka geystay iskuul kuyaal magaalada Parkland ee katirsan gobolka Florida.
Qofka xasuuqa geystay ayaa rasaas uu kasoo riday banaanka iskuulka wuxuu ku dilay 3 qof kadibna gudaha iskuulka ayaa soo galay halkaas oo uu ku dilay 12 qof oo ahaa Arday ay iskuulka isla dhigan jireen.
Taliyaha booliska magaalada Parkland ayaa warbaahinta u sheegay in ruuxa weerarka geystay uu watay qori boobe ah islamarkaana uu heystay rasaas aad u farabadan, Nicholas Cruz oo 19 sana jir ayaa horay looga eryay iskuulka kadibna wuxuu laayay Ardaydii ay saaxiibada ahaayeen.
Waa Toogashadii ugu khasaaraha badneed Taariikhda Mareykanka ee iskuul ka dhacda tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii iskuulka Connecticut oo ay ku dhinteen 20 qof oo isugu jiray Arday iyo macallimiin.
Shalay ayay aheyd markii weerar dad lagu dhaawacay uu ka dhacay xarunta wakaaladda Amniga Qaranka Mareykanka wuxuuna weerarkaasi dhaliyay feejignaan dhanka ammaanka ah inkastoo feejignaantaas aysan baajin musiibadii xalay ka dhacday gobolka Florida.